Warshadda Crayons ee Shiinaha iyo soosaarayaasha | SJJ
Pretty Shiny waxay bixisaa agabyo dugsiyeedyo kala duwan, xafiisyada xafiisyada oo ay ku jiraan qalimaanta. Crayons waxaa laga heli karaa qiimayaal kala duwan waana sahlan tahay in lala shaqeeyo. Crayons-ku waa kuwa aan sun ahayn waxaana lagu heli karaa midabbo kala duwan. Natiijooyin tayo sare leh ayaa ka dhigaya inay si gaar ah ugu habboon yihiin barashada carruurta yar-yar inay wax sawiraan marka lagu daro inay si weyn u adeegsadaan ardayga iyo farshaxanka xirfadda leh. Hadiyaddan dhiirrigelinta qiimaha jaban waxay ku habboon tahay hadiyadda inta lagu jiro dhacdooyinka bulshada, bandhigyada xirfadaha, sannad -guurada dugsiga, iyo dhacdooyinka dugsiga.
Pretty Shiny waxay bixisaa agabyo dugsiyeedyo kala duwan, xafiisyada xafiisyada oo ay ku jiraan qalimaanta. Crayons waxaa lagu heli karaa qiimayaal kala duwan waana sahlan tahay in lala shaqeeyo. Crayonsaan sun ahayn oo lagu heli karo midabyo kala duwan. Natiijooyin tayo sare leh ayaa ka dhigaya inay si gaar ah ugu habboon yihiin barashada carruurta yar-yar inay wax sawiraan marka lagu daro inay si weyn u adeegsadaan ardayga iyo farshaxanka xirfadda leh. Hadiyaddan dhiirrigelinta qiimaha jaban waxay ku habboon tahay hadiyadda inta lagu jiro dhacdooyinka bulshada, bandhigyada xirfadaha, sannad -guurada dugsiga, iyo dhacdooyinka dugsiga.
Tani waxay noqon doontaa fursad weyn oo lagu hormarinayo meheraddaada iyadoo la hagaajinayo magaca shirkaddaada ama astaanta alaabta. Nala soo xiriir adeegyada naqshadeynta farshaxanka oo lacag la'aan ah.
Way fududahay in la adeegsado Midabka, Ammaan ah oo aan sun ahayn
Lacag Lacag La'aan ah oo loogu talagalay Naqshadaha jira
Qaabab kala duwan, cabbirro iyo midabbo ayaa la heli karaa
Xulashada Ballaadhan ee Xidhmada Cusub
Ku habboon xafiiska, ardayga, dallacsiinta ama carwada caalamiga ah
Hore: Qalinka Ball Ball
qalimaan aan sun ahayn